Ciidamada Itoobiya Oo Maanta Ku Biiraya Amisom & Xaflad Ka Socota Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Xaflad lagu shaacinayo sidii ciidanka Itoobiya si rasmi ah loo hoos-gayn lahaa taliska ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta oo arbaco ka socota xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Saraakiil sare oo ka socda AMISOM, Burundi, Itoobiya iyo Uganda ayaa goob-joog ah munaasabadda, waxaana islamaanta Baydhabo lagu arkay ciidanka Itoobiya oo wata dareeska iyo astaanta lagu yaqaanno ciidanka AMISOM.
War lagu qoray bogga AMISOM ay ku leedahay Twitter ayaa lagu sheegay in ciidanka Itoobiya ay u suurta-galin doonaan ciidamada dalalka Burundi iyo Uganda inay u dhaqaaqaan qeybo ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo Shabeelaaha Dhexe.
Ciidanka Itoobiya oo ka kooban saddex guuto ayaa lagu wadaa inay ka howlgalaan gobollada Baay, Bakool iyo Gedo si loo dardar-geliyo dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka Afrikaanka ah ay kula jiraan Al-Shabaab.
Dhamaadkii sanadkii hore 2013 ayaa Midowga Afrika shaaciyey in ciidamada Itoobiya ku biirayaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.